Ndenye friza, Ndenye kefriza ngwá, gburugburu friza, Ọwara friza-ugboelu COLDCHAIN
Impingement Ọwara friza
Fluidization IQF friza
Kpọtụrụ Precool friza
Kpọtụrụ efere friza
Onwe ẹdude efere friza
ugboelu COLDCHAINEngineering maka ọhụrụ ụwa
Ugboelu specializes na friji engineering na nri ụlọ ọrụ, enye adịchaghị n'ibu na ọkụ ngwaahịa na ọrụ karịsịa maka Aquaculture na nri ọrụ izute kpọmkwem choro nke ndị ahịa anyị na oge a na na elu oru nkọwapụta.
Gịnị nwere ike anyị na-enye
Anyị ipuiche na ulo oru na friji na nri ụlọ ọrụ.
Block Ice Machine Slurry Ice Machine Tube Ice Machine Flake Ice Evaporator Mmiri nke oké osimiri flake Ice Machine Industrial flake Ice Machine
Erimeri okuko achịcha dị iche iche edetu ngwaahịa frying mmiri
Kpọtụrụ Anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndụmọdụ site ọkachamara.
Mee The echeta Choice
ugboelu ColdChain, A ike Nchikota site ZhongRong Group na ugboelu UK Foodtech Group, ji na n'ichepụta elu ngwa ngwa kefriza ngwá na nri igwe n'ihi na nri ụlọ ọrụ.
Na ihe karịrị afọ 15 na mba kefriza technology ngwa ahụmahụ.
Anyị merela agadi rụpụta akara,echesinụ àgwà akara usoro na ọkachamara na vetiran ...
Na mgbe niile technical ọzụzụ, mgbochi mmezi na upgrading ngwá usoro, Ugboelu na-arụ ọrụ mgbe nile na-amụba mmepụta arụmọrụ na arụmọrụ iji chebe anyị customers` ego.
Main akụkụ ahụ mapụtara na ngwaahịa na-eji ụgbọelu iji melite arụmọrụ nke gị osisi na-amụba mmepụta mkpụrụ.
Ugboelu ọkọnọ zuru àmà nke ngwa kefriza na ngwá na-eme ka ahaziri imewe izute dị iche iche nri ụlọ ọrụ mkpa.
Ịbụ otu nzọụkwụ n'ihu na mgbe dị ọ bụla oge na-anyị na-ejere guideline. Professional, elu oru oma, ozugbo omume hụ na ị nwere ike nweta afọ ojuju.
Ịchọpụta ihe anyị na juruoyi teknụzụ
Ugboelu ColdChain technology na-sitere Europe imewe: elu arụmọrụ na ala ike oriri, nchekwa na ọcha. The ngwaahịa imewe integrates Europe eduga technology na nka nkà, ngwá e mere n'okpuru uwa ọkọnọ yinye zuo atụmatụ dị ka nke ọma. Na-aga n'ihu oru ọhụrụ na ngwaahịa upgrading, Ugboelu ugbu a nwere nza nke proprietary ikike arịa amamihe, dị ka: elu oru oma gburugburu kefriza usoro, elu oru oma tupu jụrụ usoro, impingement kefriza usoro, fluidization kefriza usoro, akpaka defrosting technology, akpaka ihicha technology na elu oru oma airflow technology. Leading elu arụmọrụ, ala ike oriri oyi yinye ụlọ ọrụ, Ugboelu Aims ike elu uru na ibe adigide ibu maka ndị ahịa.
Nọgidenụ na-Up Iji Ụbọchị
Banye maka anyị ala ma na-eso anyị na-elekọta mmadụ media
Anyị ụlọ ọrụ na-eduga ngwọta
Oyi Solution Mkpụrụ osisi & akwụkwọ nri Industry
Ugboelu pụrụ iche kefriza technology na-eme ka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ ngwa ngwa dị ka omume na-belata ego nke cellular mmebi, na-enye a kasị na-eri-irè ụzọ ike adịchaghị ọhụrụ karịa ọhụrụ nri na ngwaahịa ndị na-enye kacha mma na ere a adịchaghị price.
Oyi Ngwọta Maka Doziri Food Industry
Ugboelu eji elu technology ka omenala imewe na-ewu oyi igwe na dabara mkpa ụfọdụ nke ọ bụla na njikere nri. Anyị IQF friza na-arụ ọrụ karịsịa ọma maka obere ibe ngwaahịa dị ka dumplings ma ọ bụ spring apụta. Anyị na-chepụta anyị ngwaahịa na-ume-oru oma na oké ọnụ na idebe ngwaahịa akatabi okop oké anya mgbe ndị kefriza usoro.
Oyi Ngwọta Maka eme bred Industry
Ugboelu manufactures kefriza ngwá iji kwado gị mkpa. N'ihi na ngwaahịa si nri-eko na kuki ma ọ bụ pastries na pasta, akọrọ oriri na-eme achịcha oru na-ekpuchi a iche iche set nke ntụ ọka-dabeere ngwaahịa tinyere na-eme bred mixes na friji mgwakota ngwaahịa. All nke anyị na ngwaahịa na-e mere na-ume-oru oma na oké ọnụ.
Oyi Ngwọta Maka okuko nhazi Industry
The okuko ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ihe na-echegbu onwe banyere, cross-ofufe, kwụsị, nje na ibu, amụba na-akwụ ụgwọ, na nri ụkpụrụ iwu. Ugboelu na-arụ ọrụ ihe ngwọta nye nsogbu ndị a mere na ị na ike hazie ma kpụkọọ okuko na bụ ike, ọhụrụ na ọnụ ya, idebe gị ahịa na-abịa azụ maka ihe.
Oyi Ngwọta Maka Erimeri ihe mmiri nhazi Industry
Ugboelu arụ ọrụ anya na Erimeri nhazi mmekọ chepụta ma wuo mmepụta edoghi maka azụ, mọsel, shrịmp, na ndị ọzọ na Erimeri. Anyị ahaziri imewe na oyi technology na-eme ka nhazi oru oma ịgbasochi mgbe ọ ka na retaining ndị ọhụrụ uto dị ka ma ọ bụrụ na ọ dị nnọọ wee si na mmiri.
Banye Up na anyị Akwụkwọ Akụkọ Ịlụ Latest mmelite
© Copyright Nortech 2018. All nri debeere.